Chemical - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Chemical)
Solon-tsifin'ny solosaina simika elektronika ho an'ny mpanofana
Solon-tsifin'ny solosaina simika elektronika ho an'ny mpanofana Anarana simika: Perfluorohexene Fluorocarbon hihena antonony andian-dahatsoratra dia Perfluorinated rano akora, izay manana dielectric avo. I T C ooling ny hafanana-niteraka ny Inverter Controller Ny tsy fahampian'ny entona simika, dia azo...
Fiarovana ara-tsakafo azo antoka ho an'ny mpampita Ny fiaran-dalamby haingam-pandeha koa dia mametraka fepetra takiana amin'ny rafitra fantsona. Ho an'ny hafainganam-pandeha maherin'ny 300 km / h. Izy ireo dia manome ny fahamendrehana fara-tampony, afaka sy mangina izy io. Mandeha haingana amin'ny...
Mametaka ny vovo-drivotra mafana amin'ny mpanofana
Mametaka ny vovo-drivotra mafana amin'ny mpanofana Anarana simika: Perfluorohexene Ny foto-kevitry ny famotehana hafanana ny mpanova ny fifandraisana dia mitovy amin'ny an'ny kapila tokana. Afaka mandefitra haingana ny hafanana avy amin'ny singa anatiny ao amin'ny mpampita vaovao mba hampihenana...
Fiarovana ara-pahasalamana azo antoka ho an'ny Lithium Battery Powered Car Anarana simika: Perfluorohexene Ny fiara elektrônôlôjia elektrika sy fitaovana fanamafisam-peo, izay ahitana ny: boaty fanadiovana rano, ny fitaovana dia satroka hafanana metaly, napetraka amin'ny lafiny iray amin'ny batterie...
HFE Fanarenana ny ordinatera elektronika Ny toetra mampiavaka ny vokatra: 1. Manadio rano Tena tondra-drano (54 ℃), ary azo ampiharina tsara amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany, ary afaka milalao anjara amin'ny fikirakirana koa mandritra ny fandroana sy fanadiovana. Ny vahaolana amin'ny...
Vahaolana amin'ny fanadiovana hexafluoropropyl methyl ether Ny toetra mampiavaka ny vokatra: 1 .. Hfe Corrless Cleaning Solution tsara fanalefahana herinaratra, ary afaka manadio amin'ny trangan-jiro, ary afaka manatsara ny toerana mety; 2.HFE tebiteby be sy teboka somary ambany, Afaka miparitaka be mivoaka sy...
Fanadiovana tsy manam-paharoa ho an'ny mari-pahaizana elektronika Ny HFE ( Hydrofluoroether) vahaolana fanadiovana dia manana tondra-drano mahamay kokoa, ary azo ampiharina tsara amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy...
Fanadiovana tsy misy poizina ho an'ny mari-pahaizana elektronika Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy...
HFE Hydrofluoroether ho an'ny elektronika Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana...
Chemical chemical Chemical Coating Af Coating Chemicals Ceramic Coating medical mask chemical coating nano Weather Resistance Chemical